Ayyaana Iid Al faxirii sababeeffachuun boru ganama Madfiin si’a sagal ni dhukaafama jedhame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Ayyaana Iid Al faxirii sababeeffachuun boru ganama Madfiin si’a sagal ni dhukaafama jedhame
On May 12, 2021 151
Finfinnee, Caamsaa 4, 2013 (FBC) –Ayyaana Iid Al faxirii waggaa 1442ffaa guyyaa boruu kabajamu sababeeffachuun ganama 12:00 irratti Madfiin si’a sagal kan dhukaafamu ta’uu Komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee beeksiiseera.
Ayyaana Iid Al faxirii waggaa 1442ffaa guyyaa boruu kabajamu caalmaatti miidhagsuuf ganama 12:00 irratti Madfiin yeroo sagal kan dhukaafamu ta’uu isaan hawaasni fi qaamni dhimmi ilaallatu akka hubatu Komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee ergaa dabarseera.
Komishinichi hordoftoota amantaa Islaamaa maraaf ergaa baga geessanii dabarseera.
Ayyaanni Iid Al faxirii waggaa 1442ffaan guyyaa boruu guutuu addunyaatti ni kabajama.
Filannoon biyyaleessa karaan nagaan xumuramuun sagalee lakkaa’uun eegameera –…
Ogeeyyiin Miidiyaa Naamusa Ogummaa isaanii karaa eegeefi miira biyyummaa olaanoon…
Filannoon biyyaleessa karaan nagaan xumuramuun sagalee…
Ogeeyyiin Miidiyaa Naamusa Ogummaa isaanii karaa eegeefi…
Oduu biyya keessaa7475